Mgbe-sales Service - Dongguan Yuechuang akpaaka Co., Ltd
The azụmahịa nkà ihe ọmụma nke YueChuang: Ike n'Ezi na pragmatic, ọkachamara na oru oma, na-emeri-mmeri imekọ ihe ọnụ , na-enye ndị ahịa na ọrụ na oru oma mgbe-sales ọrụ, anyị na-eme ndị na-esonụ ukwu nkwa ahịa anyị:
1. All ígwè ọrụ na akụrụngwa rere site ọrụ anyị, site na ụbọchị nke nabata nke nabata, free ngwá n'ozuzu akwụkwọ ikike maka otu afọ (ma e wezụga n'ihi mmadụ mere mmebi), si ngwá nabata akụkọ banyere, na ụdị nile nke mmebi kpatara nkịtị were site Party B bụ maka free mmezi na nnọchi, yi akụkụ dị ka nkwekọrịta n'etiti ndị ọzọ, na-enye ọkachamara oru nkwado maka ndụ.
2. VietNin ​​ga-enye ọzụzụ maka ndị ahịa na ngwá ọrụ na injinịa technicians na ime ihe na nkịtị ọrụ wezụga ruo mgbe ina nwere ike onwe ejikwara na nchọpụta nsogbu.
3. Mgbe emeghe sales hotline 24 awa ụbọchị, anyị ga-anabata na-enye ọkachamara ndụmọdụ mgbe na-anata idozi oku. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na saịtị maka mmezi, na-abata na saịtị dị ka oge ahụ.
4. Mgbe akwụkwọ ikike oge expires, anyị ụlọ ọrụ ga-enye mmezi ọrụ na oru nkwado dị ka kpọmkwem ọnọdụ, na n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-ana ihe, ngwa na oru ọrụ.
5. Nye ndụ ọrụ oru nkwado.
Nye ahịa na zuru okè oru nkwado na mgbe-sales ọrụ aka ahịa onwe elu oru na ọrụ mmanye, mfe mmepụta Filiks, melite arụmọrụ, akawanye ngwaahịa mma, dịkwuo factory mmepụta arụmọrụ, belata technical chọrọ nke yiri pesonel, welie akpaaka arụmọrụ, na-emepụta odi mfe na ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na na ngwaahịa. Automotive njikọ, Toyota si akpaaka-assembler maka akpakanamde njikọta na-obi.